Isitolo esidayisa yonke impahla Side Side Phakamisa Crane Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | I-CCMIE
Umsebenzi: ezokuthutha 20ft futhi 40ft esitsheni
Ukumiswa: Ukumiswa kwemishini noma ukumiswa komoya
Uhlobo lwenqola Yegiya lokufika: Umkhiqizo weJOST
Uhlobo lwenqola Brake system: WABCO
I-Side Lift Crane yi-crane ekhethekile eyayivame ukuphakamisa iziqukathi kusuka kwelinye iloli noma i-trailer iye kwenye indawo. Abantu babuye bakubize njengabalayishi abaseceleni, amalifti e-swing noma ama-trailer azilayishayo, angasisiza ekunikezeni insizakalo yokuphatha iziqukathi ephezulu. Umsebenzi wethu ukuxazulula ukuphathwa kwemithwalo embonini yezokuthutha emhlabeni. Singochwepheshe ku-trailer yamakhonteyina, ukuphatha iziqukathi nezokuthutha, sigcina sakha futhi senza imikhiqizo emisha engonga isikhathi sabaqhubi nomnikazi wemali yamaqembu ezokuthutha. Simagange ukunikeza izixazululo ngokugcwele kumakhasimende emhlabeni jikelele. Sizama ukuphuma ukuze sikunikeze isevisi enhle kakhulu, ukwaneliseka nokukhiqiza kwakho.
Inkampani yethu "ithobela inkontileka", iyakwazi ukuthobela izidingo zemakethe, ibambe iqhaza emncintiswaneni wemakethe ngekhwalithi ephezulu, inikeze abathengi ngosizo oluphelele noluphakeme, futhi ibavumele babe ngabanqobi abakhulu. Ukuphishekelwa yinkampani ukufeza ukwaneliseka kwamakhasimende ayi-100% nge-wholesale Side Lift Crane 20ft kuye ku-40ft. Siqinisekisa ukuthi singanikeza ngezixazululo ezisezingeni eliphakeme ngejubane elifanele futhi sinikeze amakhasimende angaba khona ngosizo oluhle kakhulu lwangemva kokuthengisa. Sizosebenzisana ukudala Umhlaba okhazimulayo we-Side Lift Crane.
I-Wholesale Side Lift Crane iyathengiswa, sikholelwa ukuthi ngensizakalo yethu engaguquguquki yekhwalithi, ungathola ukusebenza okuhle kakhulu nesisombululo sezindleko eziphansi kakhulu kithi isikhathi eside. Sizibophezele ekuhlinzekeni insizakalo engcono nokwakha inani elengeziwe kuwo wonke amakhasimende. Ngiyethemba ukuthi singakha ikusasa elingcono ndawonye.
Ukuvikelwa kwemvelo kokugcinwa kwe-Side Lift Crane
Ngokuvikela imvelo yethu, sicela ubhekane nodoti ovela kumkhiqizo ngokufanele lapho wenza umsebenzi wokulungisa nokugcina. Qinisekisa ukuhlukanisa, ukugcina nokulahla okuphephile imfucuza lapho usebenza, unakekela noma ulungisa umkhiqizo, ibhakede lokuqoqa imfucumfucu eqinile (iphepha lodoti, insimbi yensimbi) lenzelwe ngokukhethekile ngokuya ngezidingo ezithile, imfucuza ibuyiswe yiyunithi efanelekile .
1) Ukuqoqa zonke izinhlobo zikawoyela kadoti ngamabhakede akhethekile futhi kubhalwe ukuthi “imfucuza eyingozi” ebhakedeni, zama ukugwema ukuvuza lapho uqoqa.
2) Isitoreji sebhethri: Londoloza ibhethri elingcolile endaweni ebekiwe bese wenza uphawu olubhalwe ukuthi “imfucuza eyingozi”, ngemuva kwalokho kufanele ibuyiswe yiyunithi efanelekayo.
Langaphambilini I-Trailer Yokulayisha Isitsha Sokulayisha
Olandelayo: Ohlangothini ophakamisa